Ukuhlanza Ochwepheshe Nokulungiswa Kwezinyawo - U-Heel Ready
Izicathulo nezicathulo njengezisha.
4.7 /5 amavoti (amavoti angama-14)
Ukuhlanza ochwepheshe ngayinye I-Calzature e Ukulungisa izicathulo lokho kuzobuyisa okwakho izicathulo ebukhazikhazini bayo bokuqala: Ilungile Heel ulindele enkabeni ye Messina ngokungenelela ngokucophelela nangokuhlolisisa.
Ukuhlanza Ochwepheshe Nokulungiswa Kwezinyawo: I-Pronto Tigare inika izicathulo zakho impilo yesibili
Isikhungo esizinikezelwe ukulungisa kanye nokuvuselelwa kwe isikhafu e izicathulo zazo zonke izinhlobo, Ilungile Heel has eyodwa injini yenjini for the yokuhlanza okhokhelwayo di amabhuzu, amabhuzu e-ankle, izimbadada, othandi, izicathulo ze-décolleté namabhuzu. Lapho umshini ukuhlanza okwakho isikhafu isetshenziswa ngu Isithende esilungele, iqinisekisa amazinga aphezulu wokusebenza nokunemba. Ilungele i abasiki bengqephu, ungomunye wemishini eminingana esetshenziswa enkabeni ukubika eyakho isikhafu kubukhazikhazi bawo bokuqala. Injini enukayo ye yokuhlanza okhokhelwayo okwakho isikhafu inakekela eyakho izicathulo futhi uzihlanze ngokujulile, futhi uqinisekise ayomisa iyasebenza. Okunye ukungenelela okuwusizo okunikelwe yi Ilungile Heel, kukhona ne ukulungisa okwakho izithende egqokwa noma ephukile.
Uma kungokwakho isithende yonakele noma iphukile, vele uyithathe uyise kulesi sikhungo futhi uzosibuyisela njengento entsha ngesikhathi esifushane kakhulu. Lapho ukulungisa di izicathulo wazo zonke izinhlobo, kushesha futhi kugcina isikhathi: uzothola okwakho ngezinsuku ezimbalwa isikhafu. Ukusebenzelana okuhle nokubonisa okuhle kungamanye amandla wesikhungo: lapha uzothola a umshushi uchwepheshe ohlanganise isipiliyoni sakhe seminyaka yokusebenza komkhakha.
Ikheli: Nge-Stefano Protonotaro, 3
Umakhala ekhukhwini: 340 5483304
Inombolo ye-VAT: 02678750833